EMUI enweworị ihe karịrị 470 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị | Gam akporosis
EMUI enweela ihe karịrị 470 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị
Huawei anọwo na mpịakọta n'oge na-adịbeghị anya, na-arị elu ngwa ngwa ịghọ ụlọ ọrụ ama ama nke abụọ kachasị ukwuu n'ụwa ma na-ere ọtụtụ narị nde smartphones n'ụwa niile na afọ ndị na-adịbeghị anya, nke, tinyere ọtụtụ Honor mobiles, na-agba EMUI, nhazi ụlọ ọrụ oyi akwa.
EMUI, ka ọ dị ugbu a, enwewokwa ọganihu toro eto. Ọ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 500 na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị!
Na mmemme mgbasa ozi ụnyaahụ, Onye isi ahịa Huawei BG Software nke Huawei, Dr. Wang Chenglu kpughere nke ahụ EMUI gafere nde ndị ọrụ 470 kwa ụbọchị. Ka ọ dị ugbu a, sistemụ arụmọrụ nke gam akporo dị na asụsụ 77 na mpaghara 216.
Mgbe o nyechara ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị mkpa na ngwongwo nhazi nke onye nrụpụta ahụ, Dr. Wang gara n'ihu gosipụta ntinye nke Huawei iji melite ya. O kwuru ụfọdụ mmụba dị ịrịba ama na mbipụta EMUI ndị na-adịbeghị anya, dị ka GPU Turbo teknụzụ na EMUI 8.2, Link Turbo na EMUI 9.0, ọbụnakwa Arca Huawei Compiler ọhụrụ ya na mmelite EMUI 9.1. Na ngosipụta o kwupụtakwara mmepe nke sistemụ arụmọrụ nwere n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Site na mbupu Huawei nke ihe karịrị nde 59 nke smartphones na nkeji iri na ise nke afọ a, ụlọ ọrụ ahụ ga-agbaji ihe mgbaru ọsọ nke nde 250 maka afọ ahụ. Ka Huawei na Honor smartphones na-abanye na ahịa, EMUI tụrụ anya ito ngwa ngwa n’afọ ndị n’abia.
N'oge na-adịghị oyi akwa ga-emejuputa atumatu ọzọ ọrụ na ndozi, ebe ọ bụ na Huawei chọrọ ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ya n'ụwa, na maka nke a ọ dị mkpa ịmepụta ihe na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » EMUI enweela ihe karịrị 470 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị
Mee ka ewu ahụ rịa elu na Flip Flop
Google ga-ebido nsụgharị nke gam akporo Oreo maka ekwentị dị mfe